I-Reusable Portable Ehambayo Ehambayo Ibhodlela Lokuhamba Ukuvakasha Ukusetha China Manufacturer
Shenzhen Kean Silicone Product Co., Ltd. [Guangdong,China] Uhlobo lwebhizinisi:Manufacturer Main Mark: Americas , East Europe , Europe , Oceania , West Europe , Worldwide Ngaphandle:71% - 80% Izikweletu:BSCI, ISO9001, CE, FDA, MSDS, Test Report Incazelo:Ibhodlela lokuhamba eliyisisindo elibuyiswayo elisezingeni eliphezulu,Ukuhamba Kwamakheli Ukusetha,Ibhodlela lezokuvakasha eliphezulu
Home > Imikhiqizo > Amabhilidi Wokuhamba Esiliva > Amabhuloho Okuhamba Akhazimulayo We-Pothook > I-Reusable Portable Ehambayo Ehambayo Ibhodlela Lokuhamba Ukuvakasha Ukusetha
I-Kean Silicone isebenzisa ukucacisa okuphezulu, ukuphumelela okukhulu, inqubo yokufakelwa komjovo wokufakelwa kwe-rubber injini yokuzenzekelayo, ukucubungula amabhizinisi amancane awaziwa ngemikhiqizo ye-rubber ye-rubber! We alwasys landela: innovation kwezobuchwepheshe ehola ubuchwepheshe iphayona, ukuphepha kanye nokuvikelwa kwemvelo ngcono ikhwalithi yokuphila!
I-Kean Silicone Co., Ltd yasungulwa ngo-2006, ngokukhethekile ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni umjovo owenza imikhiqizo yamakhemikhali yamanzi, usebenzisa i-injection ephakeme kunazo zonke, ukukhiqiza okuzenzakalelayo ngaphandle kokungenelela komuntu, usebenzisa i-US% ibanga lokudla kwamanzi.
Iminyaka engaphezu kwengu-7 yokuhlangenwe nakho embonini yemikhiqizo ye-silicone kanye nabasebenzi abavelele bezobunjiniyela sizohlinzeka ngamakhasimende ethu ngemiklamo kanye nentuthuko ehambisanayo. Sinobuchwepheshe bokungena kwezingane ezincane, abathintekayo bezokwelapha, abathintekayo be-kichenware.
Ibhodlela lokuhamba eliyisisindo elibuyiswayo elisezingeni eliphezulu
Ibhodlela lokuhamba eliyisisindo elibuyiswayo elisezingeni eliphezulu Ukuhamba Kwamakheli Ukusetha Ibhodlela lezokuvakasha eliphezulu Ibhokisi lokuhamba eliyisicacisi elibekiwe Ibhodlela lokuphuza amanzi elingenakwenzeka Amabhodlela wokuhamba angenalutho Ibhodlela le-Kit elihambayo elithinta isisindo Amabhodlela amakhulu okuhamba ngezindiza